Posted by အိမ်မက်စေရာ at 8:10 AM 11 comments:
ထွက်သက်ရယ် ဝင်သက်ရယ်က မသေချာဘူး နေ့ရက်တွေက ရင်မောစရာ ခပ်များများရယ် စိတ်ညစ်တယ်လို့ ညည်းငြူဖို့ အင်အားတောင် မလုံလောက်ချင်သလို ဖြစ်ချင်တာက ဘာမှန်းကို သေချာမသိတာ ပျော်ရွှင်နေသလားမေးလာရင် ဖြေရမှာက ဘာလဲမသိတော့ဘူး.. ခပ်ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ နေရင်း လေတိုက်တာလဲ အဆန်းမဟုတ်တော့ လျှက်စီးလာလဲ မကြောက်တက်တော့ မိုးကြိုးဆိုတာ နားထောင်ကောင်းတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်တောင်ဖြစ်နေပြီ
ဟိုးဝေးဝေးက ကန္တာရ သစ်ပင်တွေကို တွေးပြီး မြင်ရောင်ကြည့်ရင် တစ်ခုခုကို သတိရလာသလိုနဲ့
နှုတ်ခမ်းမှာ အပြုံးမှန်းမသိတဲ့ အပြုံးတစ်မျိုးရောက်လာတယ်.. အသက်ရှင်ဖို့အတွက်တော့ အကြောင်းပြချက်လုံလောက်နေသေးတယ်..တစ်ချို့ တစ်ချို့ရဲ့ မျက်နှာကို မြင်ရောင်ကြည့်တဲ့အခါ ကြက်သီး ထမိတယ်.. နာကျည်းစရာတွေရယ် .. အကောင်းဆုံးတွေပါလားလို့ သတ်မှတ်ထားခဲ့ဖူးတဲ့ လူတစ်ချို့အကြောင်း တွေးရင်း နာကျင်လာတယ်.. ရှက်ကြောက်ခြင်းတတရား မရှိတက်လေခြင်းရယ် လို့ တွေးရင်း တစ်ချို့ကိုလဲ စိတ်ပျက်မိတယ်.. အဲ့ဒါနဲ့ မာနတစ်ခုကို အသေပိုက်ပြီး ရေငတ်ခံတဲ့ သူများလားလို့ မှန်ကြည့်ပြီး ပြန်မေးမိတယ်..
ကမ္ဘာပြိုတဲ့ နေ့တော့ နေသာမှာ မဟုတ်လောက်ဖူးရယ်.. ဆွဲငင်အားတွေလဲ အဲ့ဒီနေ့ရှိနေမလား ပြင်ဆင်စရာတွေ တော်တော်များများ ရှိနေမယ်လေလို့ ထင်မိတာ..တကယ်တမ်း ပြင်ဆင်ရမှာက သေဆုံးဖို့ သက်သက်ရယ်..မုသာကို တွင်တွင်သုံးတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ရယ် ပရိယာယ်များတဲ့ အိမ်တစ်လုံးရယ်.. သစ္စာမထားတဲ့ သူတစ်ချို့ ရယ် ဟန်ဆောင်ပွင့်တဲ့ ပန်းတစ်ပွင့်ရယ် ဘာမှ မြတ်နိုးစရာမရှိပါလား
နေချင့်စဖွယ် မသာယာတဲ့ နေရာပါ..
ဖုန်အလိမ်းလိမ်းနဲ့ ညစ်နွမ်းနေတဲ့ သိက္ခာတွေအတွက် အသက်ရှင် နေရတာ.. နေ့ရယ် ညရယ်သာ ပြောင်းသွားတယ် ရုန်းကန်ရတဲ့ နေ့စွဲတွေ လျော့မသွားဘူး.. ညည်းတွားတက်သူ သက်သက်ပဲလား ဆိုတော့ အမှန်က လောက ကို စိတ်ကုန်နေတာ..အဲ့ဒီအချိန်မှာ လောက က စကားပြောလာတယ်
နင့်လို လူတွေ အများကြီးရယ် ပြီးတော့လဲ ဒုံရင်း ပါပဲ တဲ့..
ကမ္ဘာပြိုမယ့် နေ့ကို စောင့်ရင်း မနက်ဖြန် အတွက်တော့ ပြင်ဆင်ရဦးမယ်...
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 10:59 AM7comments:
ငယ်ငယ်က အင်္ဂလိပ် စကားပြောတက်စဉ်က ဆရာဦးစောဝင်း
မေးလေ့ရှိတဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်း ရှိပါတယ်..
သူအိမ်စာလုပ်ခိုင်းတိုင်း စာကြည့်ခိုင်းတိုင်း ကျွန်မတို့က အမြဲ ဟုတ်ကဲ့ ဆရာလို့ လွယ်လွယ်
အဲ့ဒီအချိန်တိုင်း ဆရာပြန်မေးတက်တဲ့ စကားတစ်ခွန်းကတော့..
ကတိဆိုတာ ဘာအတွက် ပေးတာလဲ တဲ့
​တည်ဖို့ပေးတာပါ ဆရာ .....
ဟုတ်ပါတယ် ကတိ ဆိုတာ ချိုးဖောက်ဖို့ ပေးတဲ့ အရာ မဟုတ်ပါဘူး....
ဒါကြောင့် ကတိကို လွယ်လွယ် မပေးပါနဲ့ .. ပေးပြီးရင်လဲ မချိုးဖောက်ပါနဲ့..........
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 9:35 AM7comments:
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 2:32 AM 8 comments:
လူတစ်ယောက်ကို နာကျည်းမိစဉ်က အမုန်းက ပူလောင်လိုက်တာလို့ တွေးမိဖူးတယ်.. ဒါနဲ့ မေ့ပစ်လိုက်ဖို့ ကြိုးစားတယ်..
လူတစ်ယောက်ကို ချစ်မိစဉ်မှာ တော့ အချစ်က အမုန်းထက် ပိုပူလောင်တယ် လို့ ခံစားမိပြန်ရော.. ဒါပေမယ့် မေ့ပစ်လိုက်ဖို့ ဆိုတာ ဖြစ်မှ မဖြစ်နိုင်တာ...
ကိုယ်ချစ်တဲ့ သူတစ်ဦးက လှပစွာ သစ္စာ ဖောက်ခြင်းခံလိုက် ရတဲ့ အခါမှာတော့ အရာရာ ထက်ပိုပူလောင်တဲ့ ဝေဒနာကို ခံစားမိသွားသလို ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ဝေဝါးပြီး ဘာကမှ မခိုင်မာနိုင်တော့သလို..
လောကမှာ ကံအဆိုးဆုံးလူသားတစ်ယောက်မှ မဟုတ်ပဲ လျင်မြန်လွန်းတဲ့ အပြောင်းအလဲ တွေကြားထဲ အသားကျအောင် ကြိုးစားဖို့ ခက်ခဲလွန်းနေတယ်..
မြတ်နိုးစွာ ပန်ဆင်ဖူးတဲ့သူ့အပြုံးက ရက်စက်စွာ မဲ့တက်နေပြီလား....
ဘာမှမသိနားမလည်သူကိုမှ လှည့်စားရက်လေခြင်းလို့ နာကျင်မိပေမယ့် မုန်းလို့ မရနိုင်သေး..
အဆိုးဝါးဆုံးစကားတွေ ပြောပြီး ရန်တွေ့မိချင်ပေမယ့် သူနာကျင်သွားမှာ စိုးကြောက်မိတယ်..
အခြေအနေတစ်ခုကို အကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းဖို့ အရည်အချင်းတွေနဲ့ မပြည့်ဝသူပါ..
တည်ဆောက်ထားပြီးသား အရာတွေ ပျက်စီးသွားမှာကို သေသွားမှာထက် ကြောက်နေရတဲ့ အခြေအနေမှာ..
အရာရာကို ဆွေးနွေးကြည့်ဖို့လဲ နှုတ်ခမ်းတွေ ဆွံအနေလေရဲ့..
စဉ်းစားမိတိုင်း ကျလာတဲ့ မျက်ရည်ပူတွေ ပါးပြင်ပေါ်မခြောက်သွေ့နိုင်တော့....
ပြုလုပ်သူဟာ ချစ်တဲ့သူကိုယ်တိုင်လား ဆိုတာကို ယုံမှားသံသယ ရှိလဲ သေချာတဲ့ အဖြေတွေက နေရာတကာမှာ..
ချစ်ပါတယ် အကြိမ်ကြိမ်ဆိုခဲ့သူ က ခုဆို သူတပါးကို အကြင်နာစကားဆိုနေပြီ..
သတိရတမ်းတတက်ကာ ဓါတ်ပုံလှလှတွေလဲ မြင်မိတော့ ဒါ အမှန်တရား လို့ လက်ခံရတော့မှာပေါ့....
ဘယ်လိုမှ မဆုံးဖြတ်တက်စွာ စဉ်းစားရင်း ကုန်ခဲ လွန်းတဲ့ ဒီညအတွက်တော့ အိပ်မပျော်သူဟာ မျက်ရည်အကြိမ်ကြိမ်ကျမိ ပြန်ရော.........................
အဲ့ဒီလိုနဲ့ ခက်ခက်ခဲခဲ အဲ့ဒီညကို ကျော်ဖြတ်ရင်း နောက်နေ့မနက်မှာ အသက်မဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို တွေ့တော့ မျက်ရည်အသွင်သွင်ကျရင်း ပြောမိခဲ့တဲ့ စကားတစ်ခွန်းက
နာကျင်ပင်ပန်းလွန်းနေတဲ့ နှလုံးသားလေး အနားယူပါစေတော့ရယ်လို့...................
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 7:24 AM 8 comments:
အိမ်မက်စေရာ ဆိုတဲ့ ဘလော့ဒ်က အိမ်မက်အတွက် အကောင်းဆုံး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လိုပါပဲ ..ဘယ်သူမှ ပြောခွင့်မရှိတဲ့အရာတွေ ဘယ်သူမှ မသိတဲ့အကြောင်းတွေ ပျော်ရွှင်စရာ ဝမ်းနည်းစရာ တွေအားလုံးကို ဒီဘလော့ဒ်လေးမှာ ချရေးခွင့်ရှိတယ်လေ..ဒီအောက်က စာကြောင်းတွေက အိမ်မက်နဲ့ တိုက်ရိုက်အားဖြင့်တော့ မပတ်သတ်ပေမယ့် တနေ့နေ့ တချိန်ချိန်မှာ ဒီစာထဲက သက်ဆိုင်သူ တစ်ယောက် သို့မဟုတ် နှစ်ယောက်စလုံး ဖတ်မိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့...
တကယ့်ကို သိပ်ချစ်ကြတယ်ဆိုရင် ဆုံဆည်းကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်..
ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုရင် အိမ်မက်လုပ်ပေးနိုင်တာဆိုလို့ ဆုတောင်းပေးဖို့ တစ်ခုပဲ ရှိလို့ပါ...
ဒီစာထဲမှာ မပါဝင်တဲ့ တတိယလူကတော့ ဒီစာဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဝမ်းနည်းစွာ ငိုကြွေးနေခဲ့ရတယ်ဆိုတာ သက်ဆိုင်သူတစ်ဦး သို့မဟုတ် နှစ်ဦးစလုံးကို သိစေချင်ပါတယ်.........
ma yay! ah yan:1 tie. yin bar lote ya ma lae' ko ma tie. dar 1 kal pyaw dar par , bar lo. paung: sat lo. ma ya naing dar lae' hinn? ma si ka ga yu. site muu. ko ah yan: lo chin kae. del..... dar pay. mae. ma. bat ka tone. pyan muu. ka ah yan: ko aye: say: naing loon: del .... khan: ser: lo. ma naing woo: byar.... ko. ko ko lae' daww da fit mie. del .... ah yan: ko chit kae. pee: ma lwal ku dae. ah yar ko ya aung yu naing kae. pee: ma. bar ma hote dae. ah yar 1 ku. kyaunt. pyat sii: kae. ya del ..... ah yan: wann: nae' del ma yel .... ma pyaw 1 lo pot ma yel ANYWAY AND ANYHOW pot love u so much ma ..... 1 nay. nay. ma nar: ko york aung lar kae. mal ... ah chain tway kyar twar: p dar pay mae. bel twat ma. pywat kwal ma twaR: woo: ..... ae' dar ko yone pay: par ... ah yan: chit kae. del ...... ho ah yin ka ma yae. Mg
ဒီအောက်ကစာပိုဒ်လေးကတော့ အိမ်မက်ရေးတာ ပါ.. တတိယလူပြောမထွက်ခဲ့တဲ့ စကားလုံးတွေကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်..
နင့်ရဲ့ နူးညံ့တဲ့ စကားလုံးတွေကို ငါတစ်ယောက်ထဲပဲ အပိုင်ရချင်တာဆိုရင်.. ငါ့ကို အတ္တကြီးတယ်လို့ နင်ပြောမှာလား.. နင့်ရဲ့ နွေးထွေးတဲ့ အကြည့်တွေ အမြဲငါ့စီမှာ ပဲ ရှိနေစေချင်တယ်ဆို ရင်ရော အရူးလို့ နင်ငါ့ကို ပြောမှာလား...နင့်ကို စကားတတွက်တွက် ပြောတာက နင့်အတွက် အနှောင့်အယှက်စေချင်တာမျိုးမဟုတ် ပဲ ငါရင်ထဲမှာ ရှိသမျှအကြောင်းအရာကို နင်နဲ့ တိုင်ပင်ချင်တာဆိုရင်ရော ငါ့ကို ကြက်တူရွေးလို မိန်းမလို့ နင်သတ်မှတ်မှာလား.....ငါ့ရဲ့ အသုံးမကျတဲ့ ညံ့ဖျင်းမှုတွေကြားထဲကပဲ နင့်ကို နားလည်ဖို့ ငါအမြဲ ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်ရော အရာမရောက်နိုင်ပါဘူးလို့ နင်ဆိုမလား..(အိမ်မက်စေရာ)
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 3:47 AM9comments:
ကားအနီလေး သူငယ်ချင်းတစ်စု နှင့် ကျောက်တန်းရေလည်ဘုရား
ထိုကားသည် အနီရောင်ဖြစ်သည်။သေချာပြောရလျှင် အနီရောင်ဟိုင်းလပ်ကားလေးတစ်စီးဖြစ်သည်။
ထိုကားတွင် ပိုင်ရှင်ရှိသည်။ ပိုင်ရှင်မှာ မြို့နယ်၏ မျက်နှာဖုံး လူကြီးတစ်ဦးဖြစ်သည်။ လိုင်ပြေးဆွဲသည့် ကားမဟုတ်သော ထိုအိမ်စီးကား ဟိုင်းလပ်လေးကို ထိုလူသည် ကျောင်းသားများ ဖယ်ရီအဖြစ်အသုံးပြုခွင့်ပေးထားသည်။
ထိုကားကိုမောင်းသော ဒရိုင်ဘာ ရှိသည်။ သို့သော် မကြခဏဆိုသလိုပင် ပိုင်ရှင်၏ သားသည် ကျောင်းသားများကိုမောင်းပို့လေ့ ရှိသည်။ ထိုသူမောင်းသည့် နေ့တွင် ကျောင်းသားအားလုံးသည် ဟေးလား ဝါးလား နှင့် အလွန်ပျော်တက်ကြသည်။
ထိုကားအနီရောင်လေးကို ကျွန်မတို့ တစ်အုပ်စုလုံး ပထမနှစ်မှ စ၍ စီးလာသည်မှာ နောက်ဆုံးနှစ်ရောက်သည် အထိပင်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းကားများ စုံရပ်မှာ မြို့နယ်ဈေး အနားတွင်ဖြစ်သည်။ ကားအားလုံးမထွက်ခင် ကျောင်းသားများ ရောက်နှင့်၍ အဆင်ပြေသောကားတွင် လိုက်ပါကြသည်။ ဘယ်လိုက ဘယ်လို ထိုကားကို ကျွန်မရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည် မသိပါ။ သိုပေမယ့် ငယ်သူငယ်ချင်း တစ်ချို့နှင့်အတူထိုကားကို စီးဖြစ်သည်။ တခြားသူများလဲ လာစီးကြသည်။ သိုပေမယ့် နောက်ဆုံးတွင် အမြဲစီးဖြစ်သော အုပ်စုသည် အဖွဲ့ဖြစ်သွားကာ အရင်းအနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းများလဲ ဖြစ်သွားကြသည်။
တခြားသူများ ထိုကားကို မစီးချင်ကြပါ။ ဘာ့ကြောင့်ပါလဲ???
ကားဒရိုင်ဘာမောင်းသည့်အချိန်တွင် ပုံမှန်အခြေအနေမှာ ရှိသော်လည်း ပိုင်ရှင်၏သားမောင်းသည့် အချိန်တွင်တော့ ထိုကားသည် ပြိုင်ကားဖြစ်သွားစမြဲပင်။ ထို့ကြောင့်လဲ ကျောင်းသားတော်တော်များများ ကြောက်လန့်၍ မစီးရဲကြ။ အပေအတေ ဖြစ်သော ကျွန်မတို့ အုပ်စုကတော့ ဒရိုင်ဘာ လာမောင်းမည်ကိုတောင် စိုးရိမ်နေသေးကာ ထိုပိုင်ရှင်၏သား မောင်းသည့်အခါမှ ကျေနပ်တက်ကြသည်။ အကြောင်းသိသော မိဘများသည် ထိုကားအနီရောင်ကို မစီးရန်မှာတက်ကြသည်။ သို့ပေမယ့် မိဘစကားနားမထောင်သော သူငယ်ချင်းအချို့က စီးမြဲ။ ဘာမှ မသိသော ကျွန်မ၏ မိဘများကတော့ ဘာမှ မပြော။ ဒါကျွန်မအတွက် အကောင်းဆုံးပင် မဟုတ်လျှင် ကားထွက်သော အချိန်တွင် အိမ်ရှေ့မှ ဖြစ်သွားခြင်းဖြစ်ရာ ခိုးစီးလို့ မရ အိမ်က သိသွားနိုင်သည်။ ခုတော့ အဆင်ပြေသည်။ ပြောမည့်သူမရှိ။
ကားထွက်တော့မည်။ ရောက်ရှိလာသူမှာ ပိုင်ရှင်၏သား "ဟေး" တညီတညွတ်ထဲ ဝိုင်းအော်သော ကျွန်မတို့ အုပ်စုကို တခြားသူများ မျက်စောင်းထိုး၍ ကြည့်ကြသည်။ မပူပါ .. ကျွန်မတို့ ဘာကိုမှ ဂရုစိုက်ပူပင်လေ့မရှိကြ ဒါကြောင့် ပေါင်းမိကြခြင်းဖြစ်သည်။ "ကိုညီမောင်းပါ ကိုညီမောင်းပါ" ဟု ဝိုင်းအော်ကြသည်။ သူ့အမည်ကို ဝိုင်းအော်နေကြသော အုပ်စုကြားတွင် ထိုသူသည် သူရဲကောင်းကဲ့သို့ မိန့်မိန့်ကြီး ပြုံးနေသည်။
ကားထွက်ပြီ။ အားလုံးကားပေါ်ကိုတက်ကာ အသင့်နေရာယူပြီး ဖြစ်ပြီ။ ကားစက်နှိုးသံ ကြားသည်နှင့် အားလုံးတစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်အနည်းငယ် ပူးကပ်သွားသည်။ ပြီးလျှင် အနားမှာ ရှိသူ သို့မဟုတ် အပေါ်မှ လက်တန်းကို သေချာကိုင်ထားရသည်။မဟုတ်လျှင်မလွယ် ကားထွက်ပြီဆိုလျှင် အရှိန်ကို ဝုန်း ကနဲ တင်ကာ ထွက်တက်သောကြောင့် နောက်ခန်းမှ ကျောင်းသားများအားလုံး အရှေ့ဘက်သို့ စုပြုံကပ်သွားကြသည်။ တစ်ခါက အကြောင်းမသိဘဲ လာစီးသော ကျောင်းသူလေး တစ်ယောက်အဖြစ်က သနားစရာပင်ကောင်းသည်။ ထိုနေ့က ကျောင်းအပြန်ချိန် လမ်းအကွေ့မှာ တစ်ဖက်မှ ကားက အတင်းဝင်လာချိန် ကားမောင်းသူ ကိုညီက ဘရိတ်ကို စောင့်နင်းလိုက်ရာ အားလုံးအရှေ့ကို အရှိန်နှင့်ကပ်ကုန်ကြသည်။ သူမောင်းလာသည့်အရှိန်က များလွန်း၍ လူတွေလဲ ကိုယ်ကိုယ်ကို မထိန်းနိုင်ကြတော့ပေ။ ကံဆိုးသူ ထိုကျောင်းသူလေးမှာ အရှေ့ ( ကားခေါင်းနားကပ်ရပ်) တွင် ထိုင်လာလေရာ ကားဆောင့်သောအရှိန်သူ့ကို အားလုံးဝိုင်းဖိသလိုဖြစ်ကာ တက် သွားတော့သည်။ ကျွန်မမှာ သူ၏ နဘေးမှ ဖြစ်ရာ ဘာဖြစ်တာလဲ ဘာဖြစ်တာလဲ အကြိမ်ကြိမ်မေးသော်လဲ အဖြေမထွက်လာ၍ ဟဲ့ လုပ်ကြပါဦးဟ အော်ရသည်။ ကားရပ်၍အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြုစုလိုက်ရသည်။ လက်များတစ်ချောင်းနှင့် တစ်ချောင်းကပ်နေ၍ မနဲခွာရသည်။ ပရုတ်စီလိမ်း ရှုဆေးပေး ဖြစ်ကုန်သည်။ အားလုံးလဲ ငိုရမလို ရယ်ရမလိုနှင့်။ နောက်နေ့တွင် သူမသည် ကားအနီဆိုလျှင် ဝေါင်ဝေါင်ရှေးကာ ဝေးဝေးက ရှောင်တော့သည်။ ကားမောင်းသူ ကိုညီ၏ နောက်ထပ်စတိုင်တစ်မျိုးမှာ ကားမောင်းနေစဉ် မကြာမကြာ ခြေထောက်ကို ကားပြတင်းပေါက်ဘောင်ကို ထုတ်တက်သည်။ သူမောင်းသော ကားသည် ထွက်စတွင် အရှိန်အပြည့်နှင့် ဖြစ်သော်လည်း လမ်းတစ်ဝက်ရောက်လျှင် ပုံမှန်ဆိုသလို ရပ်တက်သည်။ ကျွန်မတို့ အုပ်စုကတော့ဖြင့် မပူပါ။ ကားရပ်လျှင်ကားပေါ်ကဆင်း ဝေး ဝါး နှင့် အော်။ လမ်းပေါ်က တွေ့သမျှအပင် လိုက်ချိုး ကာ အိမ်ကို သယ် နှင့် ဝုန်း ဒိုင်း ကျဲ နေတော့သည်။ သူကားပြင်ပြီးလျှင် ပြန်တက် ပြန်မောင်း နောက်ဆုံးတော့လဲ အိမ်ရောက်တာပင်။ ထိုကားအနီလေးကို နှစ်စ မှ နှစ်ဆုံး စီးခဲ့သော်လည်း ကျွန်မတို့ တစ်ဖွဲ့ တစ်စုံတစ်ရာ ပြဿနာ မဖြစ် အန္တရာယ်မဖြစ်ခဲ့ခြင်းက ကံကြောင့်လား ကိုညီပင် ကားမောင်း ကျွမ်းကျင်လို့လား ဆိုတာကို တော့ ကျွန်မလဲ မပြေတက်ပေ။ တက္ကသိုလ်တက်စဉ် ကာလ တစ်လျှောက်လုံး မှာတော့ဖြင့် ထိုကားအနီလေး မှာ ကျွန်မတို့၏ အချစ်တော် . ပျော်စရာ အမှတ်တရများစွာကို ပေးစွမ်း ခဲ့သော ဒူပေ ဒါပေ ခံသည့် ကားလေးပင်ဖြစ်သည်။
သို့ပေမယ့် ကျွန်မတို့ ဒုတိယနှစ်အရောက်တွင် ထိုကားလေးမှ ဝမ်းနည်းစရာ သတင်းတစ်ခုသယ်လာပေးခဲ့သည်။ ကျွန်မတို့ အုပ်စုနှင့်တိုက်ရိုက်မပတ်သတ်သော်ငြားလဲ ကျွန်မတို့ နှင့် ရင်းနှီးသူများဖြစ်လေရာ ကျွန်မတို့မှာ ထပ်တူထပ်မျှ ဝမ်းနည်းခဲ့ရသည်။ထိုကားလေး သည် သူကိုယ်တိုင် ပါဝင်မပတ်သတ်သော်ငြား သူသယ်ဆောင်ရာ လူများတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့လေရာ ထိုကားလေးနှင့် ထိုသတင်းမှာ တွဲ၍ ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ အဖြစ် ထင်ကျန်ခဲ့လေသည်။
နောက်ဆုံးနှစ် ကျောင်းသားများအတွက် ထိုနေ့သည် နောက်ဆုံးစာမေးပွဲ ဖြေသည့်ရက်ဖြစ်ကာသူငယ်ချင်းတစ်စု ခရီးတိုထွက်ဖို့ စီစဉ်ထားကြသည်။ကားကိုတော့ အားလုံးစုငှားကြမည်။ ထိုအခါ အားလုံးက ရင်းနှီးနေသော ကားဒရိုင်ဘာ နှင့် ကားမှာ အနီရောင်ကားလေး ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ထိုကားကို ငှားဖို့ ဆုံးဖြစ်ကာ ပြောဆိုကြတော့လဲ အဆင်ပြေသွားကြသည်။ ထို့ကြောင့် စားမေးပွဲ ပြီးလျှင် အားလုံးသံလျင်ကျောက်တန်း ရေလည်ဘုရားသွားကြမည်။ ထိုအုပ်စုမှာ ကျွန်မတို့၏ ရှေ့တစ်နှစ်မှ နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသား စီနီယာများဖြစ်ကြသည်။ ခရီးတိုဖြစ်၍ စားစရာ နှင့် အခင်းများသယ်ကြသည်။ ဒါပြီးရင် ဘယ်ကို သွားမည် ဟု အစီအစဉ်ချကြသည်။ နောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်လေရာ သူငယ်ချင်းများ နောက်ဆိုလျှင်ဆုံဖို့ သိပ်မလွယ်ကူချေ။ ထိုကြောင့်လဲ အလွမ်းသယ်ကာ အပြတ်ကဲကြ စကြ နောက်ကြ နှင့် ပျော်စရာပင်။ သို့နှင့် ကျောက်တန်းရေလည်ဘုရားသို့ရောက်သည်။ လှေငှားကာ ဘုရားကိုပတ်သည်။ ထိုဘုရားတွင် ပါးစပ်ရာဇဝင်လား အမှန်လား မသိသော လက်ဝဲမှ လက်ယာ (လား ) လက်ယာမှ လက်ဝဲ သို့လား မပတ်ရ ဟုပြောကြသည်။ တကယ်တော့ ကျွန်မတစ်ခါမှ မရောက်ဖူးသော နေရာဖြစ်နေ၍ ဘယ်နေရာတွင် ဘာရှိ ၍ ဘာလုပ်ရ မလုပ်ရကို ကျွန်မအသေအချာတော့ မသိတာ အမှန်ပင်။ ထိုအုပ်စုသည် ဘက်မှား၍ ပတ်ခဲ့သည်ဟု ပြောကြသည်။ အမှန်ဟုတ်မဟုတ်ကိုကား မသေချာပါ။ ထိုသို့လှေစီးရင်း စရင်းနောက်ရင်း အရှိန်လွန်ကာ ကျောင်းသားတစ်ဦးရေထဲ သို့ပြုတ်ကျသွားသည်။အားလုံးလဲ ပြာယာ ခတ်ကုန်ကာ ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်းမသိ။ မျက်စိတွေလဲ ပြာကုန်ကြသည်။ ကယ်ကြပါဦး လုပ်ကြပါဦး နှင့် ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင် မိဖြစ်ကုန်သည်။ ထိုအချိန်တွင် ထိုအဖွဲ့မှ တစ်ဦးက ရေထဲသို့ ခုန်ဆင်းသွားကာ သူ၏သူငယ်ချင်းကို ကယ်ရန် ကြိုးစားသည်။ အမှန်တော့ ထိုသူသည်လဲ ရေကောင်းကောင်းကူးတက်သူ မဟုတ်ပါ။ သူဘာမှ စဉ်းစားမိဟန်မတူ သူငယ်ချင်းကို ကယ်ဖို့ အရေးကြီးကာ ရေထဲ ဆင်း၍ ကယ်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ ထိုသူကို ကယ်နိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ကံဆိုးသူ ကယ်တင်ရှင် သူငယ်ချင်းမှာ တော့ ရေထဲမှ ထပ်၍ ပေါ်မလာတော့ပေ။ ကယ်ဆယ်ရေးများရောက်လာ ကာ ဝိုင်းဝန်းကြိုးစားချိန်တွင် ထိုသူ့ကို ပြန်ရှာတွေ့သည်။ သို့သော် အချိန်နှောင်းသွားခဲ့ပေပြီ။ အသက်မပါလာသော သူ၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုသာ ရှာတွေ့ခဲ့ကြသည်။ ပျော်ဖို့ရွှင်ဖို့သွားခဲ့သော သူငယ်ချင်းတစ်စုမှာ ခုတော့ မျက်ရည်မဆည်နိုင် ယောက်ျားရော မိန်းကလေးများပါ တဟီးဟီး ငိုကုန်ကြသည်။ ငိုသော်လည်းဘာမှမတက်နိုင် သွားလေသူမှာ သွားလေပြီလေ။ သူ၏အိမ်သို့ အကြောင်းကြား ကြသည်။ ကားအနီလေး နှင့် တစ်ချို့ပြန်လိုက်လာကာ သူ၏အိမ်သို့ သွားကြသည်။ တစ်ဦးထဲသော မောင်လေး၏ အကြောင်းကို ကြားကာ နှလုံးရောဂါဝေဒနာရှင်အမ( ကျွန်မတို့၏ အထက်တန်းပြ မြန်မာဆရာမ) မှာ ငိုရင်းတက်ခါ နောက်နေ့တွင် လမ်းပင်မလျှောက်နိုင်တော့ပေ။ ဆက်၍ သူ၏ အသုဘပို့သည့်နေ့မှာလဲ ထိုကားအနီလေး ဖြင့်ပင် အားလုံးစုသွားကြသည်။ အပြန်တွင်တော့ သူငယ်ချင်းအစွဲ အိမ်အစွဲ နှင့် ထိုကား ကို အစွဲဖြစ်ကာ သူပြန်ပါလာခဲ့သည်ထင်။ ကားတစ်စီးလုံး ဆိုးဝါးသော အနံ့များ အပြန်လမ်းတစ်လျှောက် လုံးပါလာခဲ့သည်။ အားလုံးမှာ ကြောက်တာက တစ်ဖက် ဝမ်းနည်းတာ က တစ်ဖက် မျက်ရည်များမဆည်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပြန်သည်။
ထိုအဖြစ်အပျက်ကား ကျွန်မတို့ ဒုတိယနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ထိုကားအနီလေး နှင့် ပတ်သတ်သည့် အကြောင်းအရာတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်မတို့ နောက်ဆုံးနှစ်တွင်လဲ ခရီးတိုထွက်ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော် ထိုကားလေးကိုကား မငှားဖြစ်ပဲ သူငယ်ချင်းအိမ်မှ ကားနှင့်သွားဖြစ်ကြသည်။
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 9:31 AM4comments:
ဒီပို့စ်ရဲ့ မူလဆိုဒ်က http://www.zwekabin.org ဖြစ်ပါတယ်..အိမ်မက်စေရာ မှ ပြန်လည်ကူးယူဖေါ်ပြခြင်း သာဖြစ်ပါတယ်...
ရှည်လွန်းလို့ ဖတ်ဖို့ အဆင်မပြေခဲ့ရင်တောင် ဟိုးအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ နိဂုံးဆိုတာလေးကိုတော့ သွားဖတ်စေချင်ပါသည်..(အိမ်မက်စေရာ)
ဥပမာအားဖြင့် ဂျပန်လူမျိုးတို့သည် မိမိတို့ ဘုရင်ကို "နေနတ်" မှ ဆင်းသက်လာသည်ဟု ယုံကြည်ကြပြီး မိမိတို့လူမျိုးကိုလည်း "နေနတ်အနွယ်" များဟု ယူဆကြသည်။
ထိုနည်းတူစွာ ကရင်လူမျိုးများသည်လည်း မိမိတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ထူးခြားသော အကြောင်းအရာ တခုခုအပေါ် မူတည်၍ ခေါ်တွင်သည်လားဟု ယူဆစရာ ရှိပါသည်။ ယခင်က ရေးသားခဲ့သော ကရင်၏ မူလဇစ်မြစ် ပထမပိုင်းတွင် မွန်ဂိုလူမျိုးများ အစောဆုံး အခြေချနေထိုင်သည်ဟူ၍ သမိုင်းသုတေသီများ သိရှိလာသည့် မက်ဆိုပိုတေးမီးယား ဒေသမှ ပါရှန် ပင်လယ်ကွေ့ထဲသို့ စီးဝင်သော "ကရန်မြစ်"ကိုအစွဲပြုခေါ်ခြင်း ဖြစ်နိုင်စရာ အကြောင်းရှိကြောင်း ထင်မြင်ယူဆချက်ကို တင်ပြခဲ့ပါသည်။
ကာလကတ္တား တက္ကသိုလ်တွင် ပညာသင်ကြားခဲ့သော သိက္ခာတော်ရ ဆရာကြီး မန်းဘရင်က ၎င်း၏ လေ့လာသိရှိမှုကို ကျနော့်အားပြောပြရာတွင် ရှေးတရုတ်များသည် ကရင်လူမျိုးကို "ခဲ့ရင်" ဟု ခေါ်ကြသည်။ "ဧည့်သည်" များဟူ၍ အဓိပ္ပါယ် ရသည်ဟု ဆိုသည်။
ထိုအဆိုသည်လည်း ဖြစ်နိုင်ပေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကရင်လူမျိုးများသည် အခြားသော အရပ်ဒေသ တခုခုမှ တရုတ်ပြည်အနောက်ဘက် နယ်စပ်သို့ ရောက်ရှိလာသဖြင့် ဧည့်သည်များ ဖြစ်နေခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဟစ်ဆော့ အမည် ပေါ်လာပုံနှင့်လည်းဆင်တူနေပါသည်။ မာကိုပိုလို၏ မှတ်တမ်းတွင် ကရင်လူမျိုးကို "ကရယင်" "ကရယင်နယ်" ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။
(Pwo Karen by James W. Hamilton, published in 1976, by West Publishing Co. "Foreward" page VII, 34th line. The other
major branch, the Pwo – Baker's Peguan (i.e., Mon) Karen many of whom, as Buddhists, … )
ယူရိုပွိုက် အနွယ်ဝင်များမှာ အာဖရိကတိုက် မြောက်ပိုင်းနှင့် ဥရောပတိုက်သို့ ရောက်ရှိသွားကြသည်။ ထင်ရှားသည့် ရှေးဦးမျိုးနွယ်များမှာ ဆီးမိုက်၊ ဟန်းမိုက်၊ အာရိယန် စသည်တို့ ဖြစ်ကြသည်။ အာရိယန်များသည် အိန္ဒိယပြည်သို့ပင် ရောက်ရှိကြသည်။ ၎င်းယူရိုပွိုက်များကို Compton's Encyclopedia စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ S.(K.L) စာမျက်နှာ 98-A တွင် ပါရှိသော Language Family Tree ခေါ် ဘာသာစကားမိသားစုတွင် ထင်ရှားစွာ တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
၃။ အိန္ဒု - ဂင်္ဂါ မြစ်ဝှမ်းဒေသ (အိန္ဒိယပြည်) (Indus, Ganges)
အထက်ပါ လူယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားရာ ဒေသကြီးများအနက် အေဂျင် ပင်လယ်ဒေသနှင့် နိုင်းလ် မြစ်ဝှမ်း အထက်ပိုင်း ဒေသများတွင် ဆီးမိုက်၊ ဟန်းမိုက် အနွယ်ဝင်များ နေထိုင်ကြပြီး မွန်ဂို အနွယ်ဝင်များ နေထိုင်ကြောင်း မသိရှိရပေ။ သို့ဖြစ်၍ မွန်ဂို အနွယ်ဝင် ကရင်လူမျိုးများ စတင်ပေါ်ပေါက်လာမှုတွင် ထည့်သွင်း စဉ်းစားရန် လိုမည် မဟုတ်ပေ။ မြေထဲ ပင်လယ် မြောက်ဘက်နှင့် အေဂျင် ပင်လယ် မြောက်ဘက်ဥရောပတိုက်ဘက်တွင် အာရိယန်အနွယ်ဝင်များ ပျံ့နှံ့နေထိုင်ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် ကျန်ရှိသော လူ့ယဉ်ကျေးမှု စတင်ထွန်းကားရာ ဒေသများအနက် အိန္ဒု - ဂင်္ဂါ မြစ်ဝှမ်း ဒေသသည် အိန္ဒိယပြည်တွင်ရှိပြီး အသားမည်း ဒရာဗီးဒီးယန်း Dravedian များသာ စတင် အခြေချရာ ဒေသ ဖြစ်သဖြင့် အသားဝါ မွန်ဂို အနွယ်ဝင် ကရင်လူမျိုးများသည် ထိုဒေသမှ စတင်မည် မဟုတ်ကြောင်း သေချာပေသည်။ သို့ဖြစ်၍ မြစ်ဝါ မြစ်ဝှမ်း ဒေသနှင့် မက်ဆိုပိုတေးမီးယား မြစ်နှစ်မွှာ မြစ်ဝှမ်းဒေသကို ဆက်လက် လေ့လာရပေမည်။
(History of the world by Weech, second edition, page 333, Acient China " The Chinese grew up as dwetters in houses,
not as nomads in tents.")။
knowledge for all, vol2by Sir John Hammertal, page 132, "Early history of China and Japan", The Chinese people, like
Asia, - )
သို့ဖြစ်၍ ကျန်ရှိသော မြစ်နှစ်မွှာ မြစ်ဝှမ်းဒေသ (၀ါ) ရှိနားလွင်ပြင် (၀ါ) မက်ဆိုပိုတေးမီးယားဒေသ ကိုသာ လေ့လာရန် ရှိပါသည်။မြစ်နှစ်မွှာ မြစ်ဝှမ်းဒေသ၏ ထူးခြားချက်မှာ သမိုင်းသုတေသီနှင့် ပညာရှင်အများက လူမျိုးပေါင်းစုံတို့၏ ယဉ်ကျေးမှု စတင်ရာဒေသ Cradle of Civilization နှင့် လူမျိုးပေါင်းစုံတို့၏ မြေပုံ Dust heap of the nations ဟု အသိအမှတ်ပြု ထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ (Lands and peoples vol III, The grower society) page 217, In the garden of Eden, Mesopotamia, … has been called the Cradle of cilivation "because here the humen race is thought to have had its beginning and it has also been formed the dust heap of the nations" because the ruins of mighty empires or ancient times are buried under its sunbaked soil.)
ကမ္ဘာဦးကျမ်းတွင်လည်း လူကိုစတင်ရာ "ဧဒင်ဥယျာဉ်" ဆိုသည်မှာလည်း ဤဒေသကို ဖော်ညွှန်းလျှက် ရှိသည်။
ဥပမာ - ပဒေါင်၊ ကရင်နီ၊ ပအိုဝ့်၊ ယင်းဖြူ၊ ယင်းနက်၊ ယင်းကြား၊ လားဟူ စသည့် ကရင်မျိုးနွယ်ခွဲများကို ထည့်မပေါင်းဘဲ ခွဲထားသောကြောင့် နည်းနေရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၅။ ဟန်း သည် ယခု ဟန်ဂေရီ နိုင်ငံ၌ နေထိုင်လျှက် ရှိသည်။ (မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ ၁၄၊ က ၄၉ - ၅၁ - ၆၅)
၇။ ကရေ။ မာကိုပိုလို ခရီးသွားမှတ်တမ်း (The travels of Marcopolo, edited by Thomas Wright, MA. FRS.) (ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်) အခန်း ၃၉ - တ - ၂၃၄ တွင် ကရင်လူမျိုးများသည် ယူနန်နယ်၌ နေထိုင်ကြောင်း၊ နယ်ကြီး ၇ နယ်ခွဲ၍ အုပ်ချုပ်ရကြောင်း၊မြို့တော်မှာ ယာချိ (Yachi) ဖြစ်ကြောင်း၊ ကရင်၏ အမည်ကိုလည်း ကရေရင် (Karaian - Karaianer) ဟု ရေးသားထားသည်ကို
ထူးခြားသည့် အချက် တခုမှာ ကရင်များ၌ မိဘဘိုးဘွား အစဉ်အဆက် ပြောကြသော "ထီးဆဲ့မဲ့ယွာ" (River of punning sand) ဖြစ်သည်။ ထီးဆဲ့မဲ့ယွာ ဆိုသည်မှာ ရေစီးဆင်းရာတွင် သဲများပါ ရော၍ စီးနေသော နေရာဒေသကို ရည်ရွယ်ပြောခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤစကားအရ ကရင် ဘိုးဘေးများသည် အာရှ အရှေ့တောင်သို့ တရွေ့ရွေ့ ပြောင်းရွှေ့လာရာ၌ သဲနှင့် ရေ ရော၍ စီးဆင်းသော ထူးထူးခြားခြားရှိသည့် နေရာကိုဖြတ်ကျော်လာရကြောင်း ဖော်ညွှန်းလျှက်ရှိသည်။
သို့ဖြစ်၍ အာရှတိုက် ကုန်းတွင်းပိုင်း ထိုနေရာကို အမျိုးမျိုး ရှာဖွေကြည့်ရာ ယခု အီရန်နှင့် အာဖဂန်နစ္စတန် နိုင်ငံ၏ မြောက်ဘက်၊ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုတွင် ပါဝင်သော တာကစ္စတန် (Turkestan) နယ် (ယခု သီးခြားနိုင်ငံ) တွင် ၎င်း ထီးဆဲ့မဲ့ယွာ အမည်နှင့် ကိုက်ညီသော နေရာထင်ထင်ရှားရှားရှိကြောင်း သိရပါသည်။ (See. Lands and Peoples. Vol III, p163- "A Glimpse of Turkestan" In this strange land of Turkeston, The surface of the earth is constanl changing, rivers are shifting their courses or wandering off to beswallowed up by the desert courses or wandering off to be swallowed up by the desert sands.)
အချို့က ထီးဆဲ့မဲ့ယွာကို မြစ်ဝါမြစ်ဟု ယူဆကြသည်။ မြစ်ဝါမြစ်သည် 'လိုးအက်စ်' ဒေသများကို ဖြတ်ကျော်လာရသဖြင့် ရေ၏အရောင်မှာ အ၀ါရောင် ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ယခု ကရင် ဘိုးဘေးများ ပြောသော "သဲစီးဆင်းသောမြစ်" "သဲစီးဆင်းသောချောင်း" ဆိုသည်မှာ ၎င်းတို့ ဖြတ်သန်း ကျော်လွှားရာ၌ အလွန်အန္တရာယ် ရှိပုံရပြီး အလွန်ခက်ခဲပုံ ရပါသည်။ သို့ဖြစ်၍လည်း ၎င်းဒေသကို မမေ့နိုင်ဘဲ သားစဉ်မြေးဆက် ပြောဆိုလာကြခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
အထက်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ကရင်တို့သည် တာကစ္စတန်နယ်၏ အနောက်တောင်ဘက် အီရန်နိုင်ငံ (ယခင်အခေါ် ပါရှားနိုင်ငံ)အနောက်မြောက်ဘက်ကို ဖြတ်ကျော်လိုက်ပါက မြစ်ဝှမ်းယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားသော "မြစ်နှစ်မွှာ" မြစ်ဝှမ်းဒေသကို ရောက်ပေမည်။
ဥပမာအားဖြင့် 'စကော' (မြန်မာအခေါ် 'စော်ကဲ') သည် အကြီးအကဲ ခေါင်းဆောင် စော်ဘွားဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ တိုင်းရင်းသားရိုးရာယဉ်ကျေးမှု "ကရင်" စာအုပ်တွင် စော်ကဲသည် ၁၁၅၀ ခန့်ကို အုပ်ချုပ်ရသည်ဟု ဆို၏။ ကရင်များက မိမိ အကြီးအကဲကိုခေါ်သော'စကော' သည် မြစ်နှစ်မွှာ မြစ်ဝှမ်းဒေသတွင် အင်ပါယာနိုင်ငံ ထူထောင်၍ အုပ်ချုပ်ခဲ့သော ဆီးမိုက်ခေါင်းဆောင် 'ဆာဂွန်' နှင့် အခေါ်အဝေါ်တူပါသည်။ မြန်မာ့ သမိုင်းမှာ "မင်းကြီးစွာစော်ကဲ ဘယ်သူလဲ" သိလိုသော ကရင်လူငယ်များ "မှန်နန်းရာဇ၀င်" ကို အခေါက်ခေါက် အခါခါ
ဖတ်၍ လေ့လာနိုင်ပါသည်။ (History of the World by Leech, p56 "Sargon Empire" Propably about 275089,aSemitie chieftain called Sargon ruled in Akkad, and he wasatruly great soldier.)
ကရင်လူမျိုးတို့၏ ယဉ်ကျေးမှု အသုံးအဆောင် တခုဖြစ်သော ကျွဲချိုသည် ဣသရေလ၊ ယုဒတို့၏ ကျွဲချိုနှင့် တူသည်။ကရင်လူမျိုးတို့က မိမိတို့ ကိုးကွယ်သော တန်ခိုးရှင်၊ ဘုရားကို ယွာ (Ywah) ဟု ခေါ်သည်။ ဆီးမိုက်အနွယ်ဝင် ဣသရေလ ဟီဘရူးတို့က ဘုရားကို ယာဝယ် (Yahweh) ဟု ခေါ်သဖြင့် အလွန် ဆင်တူသည်။ (A star in the east by Rev. Edward Norman Haris p.30, The Karen name for God, Y'wah is very like Yahweh … Ancient Hebrew pronunciation of the scored name Jehovah.)
ကရင်များသည် ရှေးအခါက ယေရှုခရစ် ဆိုသည်ကို ကြားလည်း မကြားဘူးပါ။ ကိုးလည်း မကိုးကွယ်ပါ။ ယွာ (Y'wah) ကိုသာ ကိုးကွယ်သည်။အော်ဘွာ ပြုလုပ်ခြင်းသည် ဘုရားကို ယဇ်ပူဇော်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ဂေါတမ ဗုဒ္ဓကိုလည်း မကိုးကွယ်ခဲ့ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်လာပြီးမှသာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၊ ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်များ ဟူ၍ ဖြစ်လာခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ကရင်ကိုးကွယ်သော ရှေးဘုရားမှာ ယွာ (Y'wah) သာလျှင်ဖြစ်သည်။ ယခု ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ကရင်များ အော်ဘွာ နတ်စားခြင်းသည် ရှေးအစဉ်အလာအတိုင်း ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း (အတွဲ ၁၊ စာ ၂၄၈) ၌ ကော့ကေးရှားနယ်ရှိ တောင်တန်းများသည် အချို့နေရာ၌ မိုင်ဝက်ခန့်သာ မြင့်သည်။ ကျောက်နံရံကြီးသဖွယ် ဖြစ်နေပြီးသော် အချို့တောင်ထိပ်များမှာ ပေ ၁၆၀၀၀ ကျော်မြင့်သည်။ အမြင့်ဆုံး တောင်ထိပ်မှာ ပေ ၁၈၄၈၁ မြင့်သော အဲလ်ဗရူး တောင်ထိပ်ဖြစ်သည်။ ယင်းမှာ ဥရောပ တောင်များအနက် အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ တောင်ကြားများတွင် ရေခဲမြစ်ပေါင်း ၉၀၀ ကျော်ရှိသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းအခက်အခဲများကြောင့် ကရင်များသည် ကော့ကေးဆပ်တောင်တန်းကို မကျော်နိုင်တော့ဘဲ အရှေ့ဘက်သို့ ထွက်ခွာလာသည်ဟု ယူဆရသည်။ ထိုမှတဆင့် ထီးဆဲ့မဲ့ယွာ ရှိသည်ဟု ယူဆရသော တာကစ္စတန်နယ်ကို ဖြတ်ပြီး ကမ္ဘာ့အမိုး "ပါမီယာ" (Pamirs)တောင်၏ မြောက်ဘက်ဝန်းကျင်မှ ဖြတ်ကာ တရုတ်ပြည် အနောက်ဘက်နှင့် တောင်ဘက်သို့ ရောက်ရှိပြီး တိဘက်ဒေသမှ မဲခေါင်၊ သံလွင်၊ ယန်စီကျန်မြစ်ကြောင်းများအတိုင်း အရှေ့တောင် အာရှသို့ ပြောင်းရွှေ့လာကြသည်ဟု ယူဆရသည်။ ပြောင်းရွှေ့လာပုံမှာ တရွေ့ရွေ့နှင့် တသုတ်ပြီးတသုတ် လူရေစီးကြောင်းသဖွယ် ပြောင်းလာသည်ဟု ယူဆရပေမည်။
အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း မွန်ဂိုအနွယ်ဝင် ကရင်များသည် အာရှအရှေ့တောင်သို့ ကျောက်ခေတ်နှောင်း ကုန်ဆုံးပြီး ကြေးခေတ် ထွန်းကာချိန်၌ ၀င်ရောက်လာခဲ့သည်ဟု ယူဆရသည်။ ကြေးလက်နက် ပစ္စည်းများကို မြောက်ဗီယက်နမ် မြစ်နီမြစ်ဝှမ်းရှိ "ဒုံးစောင်းယဉ်ကျေးမှု" (Donsonnian culture) ၌ တွေ့ရှိသည့်အပြင် မြန်မာပြည်နှင့် ကမ်ပူးခြား (ကမ္ဘောဒီးယား) ၌လည်း တွေ့ရသည်။
မတရာပျူအဆုံးကား "စောဦးစွာ" မင်းပြု၏။
သို့သော် ရှေးဟောင်းစာဟောင်းကို အရူးခြင်းတောင်း သဖွယ်ထား၍ လစ်လျူရှုရမည်မှာလည်း အခက်ပင်ဖြစ်သည်။ စာဟောင်း၌ပါသော ဘုရင်အမည်များ၊ မြို့အမည်များ ယနေ့ထင်ရှားသော မြို့များ၏ စကားလုံးရင်းမြစ် ဖော်ပြချက်များ "ဥပမာ- မက္ခရာ၊ ပင်လယ်"၊မင်းအရေအတွက် အသေအချာ ဖော်ပြချက်များကို ကြည့်ရခြင်းအားဖြင့် မဟုတ်ခါမှ လွဲရော၊ ရာဇ၀င်တန်ဘိုး မရှိသည့်တိုင်အောင် ရာဇပုံ(Tales of Kings) တန်ဘိုးအားဖြင့် မုချရှိသည်ဟု ဆိုရပေမည်။ (မောင်ကန် ပျူ မြန်မာစွယ်စုံတွဲ ၂၊ စာ ၂၄၅)။ ဤမှန်နန်းရာဇ၀င် အထောက်အထားအရ ပျူများ မြန်မာပြည်အနှံ့ ရှိနေသည်မှာ ထင်ရှားပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ယေရှုခရစ်မမွေးမီကတည်းက ကရင်များသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အများအပြား ရှိနှင့်ပြီး ဖြစ်သည်။
North. page 133, 1st col. … The Nuong – Ya'o and the Meo, whose villages are found above the 3000 foot level.)
ဤကျွန်းတွင် အင်ဒီးယန်းသွေးပါသော ဒယက် (Dyaks) များ တွေ့ရသကဲ့သို့ ကရင်အမျိုးအနွယ် ကယမ် (Kayans, Kenyahs) များကိုလည်းတွေ့ရသည်။ ၎င်း ကယမ်များကို ဗိုလ်မှူးဘရှင်က ဒယက်နှင့် လွဲမှားဖော်ပြခဲ့သည်။ ကယမ်သည် အသားဝါအနွယ်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ ဓာတ်ပုံကိုလည်း Compton's Picture Encyclopedia, vol 2, 1956, page 256 တွင် တွေ့နိုင်ပါသည်။ ဤစွယ်စုံကျမ်း စာမျက်နှာ ၂၅၄
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 6:03 AM6comments:
Vampire Woman ( ကြောက်တက်သူများ ပုံ မကြည့်ပါနှင့်)
အသက် ၃၅ နှစ်ရှိတဲ့ Mexico သူ Maria Joes Cristerna ဟာ သူမကိုယ်သူမ vampire တစ်ကောင်အဖြစ် ခံယူထား သူဖြစ်ပါတယ်..
သူမဟာ တက်တူး ဝါသနာရှင်တစ်ဦး ဖြစ်သလို တက်တူးကို ရူးသွပ်သူတစ်ဦးဖြစ်တယ်.. သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တော့ ၁၀၀% ပြည့် တက်တူးများကို ထိုးထားပါတယ်..ဒါ့အပြင် သူမရဲ့ နဖူးပေါ်မှာလဲ titanium နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဂျိုနှစ်ခုကို အသားထဲမြုပ်၍ တပ်ဆင်ထားပါတယ်..ချွန်ထက်တဲ့ တိရစ္ဆာန် အစွယ်နှစ်ချောင်းကိုလဲ သွားရဲ့ ထောင့်နေရာ တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာ တပ်ဆင်ထားပါသေးတယ်..သူမရဲ့ အသွင်ကို သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်ကဲ့သို့ အသွင်ပြောင်းထားသော်လည်း လက်တွေ့ဘဝမှာတော့ သာမန်လူတစ်ဦးရဲ့ဘဝ ကဲ့သို့သာ နေထိုင်ရသူပါ.. သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ တပ်ဆင်ပြုလုပ်ထားသောအရာများဟာ သူမအတွက် ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့် ခွန်အားကို ရရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်..ဒါတွေအာလုံးကို ထုံဆေးအသုံးမပြုပဲ တပ်ဆင်ထားခဲ့တာပါလို့ လဲ သူမက ဆိုပါတယ်..သူမရဲ့ဦးခေါင်းပေါ်မှာ ဘာကြောင့်ဂျိုတပ်ဆင်ထားရသလဲဆိုရင် ငယ်စဉ်ကထဲက သူမဟာ vampire များကို ရူးသွယ်စွဲလန်းသူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့လို့ပါပဲ..ဒါကြောင့် သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်ကဲ့သို့ ပြောင်းလဲ ယုံမက မျက်လုံးအရောင်ကိုပါ သူမလိုချင်တဲ့ vampire မျက်လုံးကဲ့သို့ ပြောင်းလဲ ခဲ့ပါတယ်..အခုထက်ထိတော့ သူမရဲ့ ပြောင်းလဲ မှုတွေအားလုံး မပြည့်စုံသေးပါဘူး လို့ သူမက ဆိုပါတယ်..နောက်ထပ်ဂျိုများကိုလဲ သူမရဲ့ ဦးခေါင်းအနောက်ဖက်မှာ ထပ်မံထည့်သွင်းချင်ပါသေးတယ် ဟုဆိုပါသေးတယ်..
တက်တူးဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ထာဝရ တည်ရှိနိုင်မယ့် အရာတွေဖြစ်ပြီး ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ သေဆုံးခြင်းဆိုတာ မရှိတဲ့ သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်အစစ် ကဲ့သို့ ဖြစ်ချင်ပြီး သူမရဲ့ အသက်ဝိဥာဉ်ကို တစ်ပါးသူတစ်ဦးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ဆက်လက်အသက်ရှင်သွားနိုင်တဲ့ ဘဝကို ရလိုကြောင်း.... ကို သူမရဲ့ vampire အဖြစ်ခံယူပွဲ အခမ်းအနားမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်..
Maria Jose Cristerna, Mexico 'Vampire Woman,' အား ဘာသာပြန်သည်..
ကြောက်တက်ရင် အောက်က ပုံတွေ မကြည့်နဲ့နော်......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
တကယ့် vampire တောင်သူ့လောက် ရုပ်ဆိုးမှာ မဟုတ်ဘူး..း( လေဒယ်
ဆံပင်ရှည်ရှည် အရပ်မြင့်မြင့် ကိုယ့်ချစ်သူလေး
သူ့ကြည့်ပြီး vampire တောင်လန့်သွားမယ့် ..ဘယ့်နှယ်ဟာကြီးတုန်းဆိုပြီး
တစ်နေကုန်ထိုင်ပြီး အစိမ့်စိမ့်ကြည့် ... ဖိုးကာ သီချင်းက သူ့တွက်ထင်တယ်နော်.. အဟီး
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 3:34 AM7comments:
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 4:19 PM 8 comments:
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 7:16 AM5comments:
နင်ကတော့ ချစ်သူနဲ့ ရွှေလက်တွဲဖို့ အရေးကြိုးစားပမ်းစား ပြင်ဆင်နေတယ်ပေါ့..ဝမ်းသာပါတယ်သူငယ်ချင်းရယ် စိတ်မကောင်းတာတစ်ခုက ငါနင့်မင်္ဂလာပွဲမှာ ရှိမနေနိုင်တာကိုပါ..
မှတ်မိသေးလား ငါတို့အိမ်ရှေ့က ကျောင်းကိုလေ.. ငါက ဆယ်တန်းအထိ တက်ခဲ့ပေမယ့် နင်က တော့ ၈ တန်းမှာ ကျောင်းပြောင်းသွားတယ်.. ကောင်မလေးတွေတိုင်းသဘောကျတက်တဲ့နင့်ကို ငါကြည့်မရပေမယ့် ငါ့သူငယ်ချင်းကတော့ နင့်ရည်းစားဖြစ်သွားသေးတယ်..
နင်နဲ့ သူပြတ်သွားတာ ငါ့မယောဂမကင်းဘူးလို့ တစ်ချို့ပြောကြပေမယ့် ငါက တော့ ငါ့လိပ်ပြာငါသန့် တယ် ..နင်လဲ ဒီလိုပဲမို့ ငါတို့တွေ အခင်အမင်မပြတ်ခဲ့ဘူးနော်..
တက္ကသိုလ်မှာလဲ မေဂျာမတူပေမယ့် ငါတို့ သူငယ်ချင်းတွေ အမြဲမခွဲပဲ တတွဲတွဲ ရှိနေတယ်နော်.. ကျောင်းသားရေးရာ ကန်န်တင်းကို မှတ်မိသေးရဲ့လား.နင်က နင့်ကောင်မလေးနဲ့ အတူတူ ထိုင်တိုင်း ငါတို့တွေမကျေမချမ်းဖြစ်ကြသေးတယ်..ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်နင်က အားလုံးထဲမှာ ပေါ်ပြူလာပဲ ပေါ့..း)
နင့်ရဲ့အရှုပ်ထုပ်တွေကြားထဲမှာ ငါက အမြဲကန့်လန့် ကန့်လန့် ဝင်လုပ်တက်တယ်.. နင်လဲငါ့ကို တစ်ခါတစ်လေခုတုံးလုပ်တယ်.. ဒါပေမယ့်ငါတို့ အခင်အမင်မပြတ်ခဲ့ဘူးရယ်နော်..
ဒုတိယနှစ်ရောက်တော့ အရမ်းလှတဲ့ ငါ့ရဲ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းလေးနဲ့ နင့်ကို ငါအောင်သွယ်ပေးခဲ့တာလေ..မရမကကို ငါ အောင်သွယ်ခဲ့လို့ နင်တို့ ချစ်သူတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြသေးတယ်.. သူက သိပ်ချစ်ပြီး နင်ကမချစ်လို့ နင်တို့ လမ်းခွဲခဲ့ကြပြန်ရော.. ငါနင့်ကို စိတ်တိုလိုက်တာလေ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နင်က ငါ့ရဲ့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတော့ဖြစ်နေဆဲပါနော်..
အဲ့ဒီလိုနဲ့ နင်နဲ့ အဝေးဆုံးကို ငါရောက်သွားလဲ သံယောဇဉ်တွေပြတ်သွားတယ်လို့မရှိပဲ နားလည်နေကြတုန်း..
ရုတ်တရက်ဆိုသလို နင်ငါ့ကို အဆက်အသွယ်ဖြတ်ခဲ့တယ်..
မှတ်မှတ်ရရ မိခင်များနေ့က ပေါ့ ..
ငါနင့်ညီလေး နဲ့တောင် အဲ့ဒီနေ့က စကားပြောခဲ့သေးတယ်.. ငါတို့နှစ်ယောက်စောင့်နေလဲ နင်ရောက်မလာခဲ့ဘူးရယ်....
နောက်ဆုံးတော့ မှ ငါသိရတာက နင့်ကောင်မလေးကမကြိုက်လို့တဲ့...
စိတ်မကောင်းပါဘူး လို့ ပြောယုံကလွဲ ငါဘာပြောရမလဲ သူငယ်ချင်းရယ်..
ငါတို့ သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ် နှစ်ပေါင်းအများကြီး ရှည်ကြာခဲ့တာ..မိန်းကလေး တစ်ယောက်အတွက်နဲ့ သူငယ်ချင်းကို မမေ့တက်တာ ငါအသိ..
ခုတော့ နင်ပြောင်းလဲသွားပြီ နော်..
ဒါပေမယ့် ငါနားလည်ပါတယ်.. နင့်ရဲ့ဘဝလက်တွဲဖော်လေ နော်..
အပျော်တွဲတဲ့ ချစ်သူရည်းစားမဟုတ်ဘူးရယ်.. နင် သူ့အပေါ်အလေးအနက်ထားတာ ငါဝမ်းသာပါတယ်..
သစ္စာမတည် ဖောက်ပြန်တက်တဲ့ ယောက်ျားတွေထဲ ငါ့သူငယ်ချင်းနင်မပါဘူးရယ်ဆိုတာ ငါသေချာနေမှတော့ နင်ငါ့ကို အဆက်အသွယ်ဖြတ်လဲ ငါဝမ်းမနည်းပါဘူး...နင့်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲအတွက် ငါတို့ရဲ့ သူငယ်ချင်းမေတ္တာကို လက်ဖွဲ့လို့ သဘောထားပါတယ်..နင်ဇနီးလောင်းလေး ကြည်ဖြူပါစေကွယ်...
နေကောင်းလား ဆိုတဲ့အမေးကို လဲ ပြန်မဖြေတော့..
အဆင်ပြေလားဆိုတာ လဲ အကြောင်းမကြားတက်တော့..
နင့်ကို သတိရတာတောင် အိမ်ဖုန်းကို ငါမခေါ်ခဲ့ဘူး.. နင်ချစ်သူလေး မျက်နှာညိုမှာစိုးလို့
နင်ပြောပြောတက်တဲ့ နင့်ရဲ့ အချစ်အိမ်လေး ငါကြောင့် ပြိုပျက်သွားမှာစိုးလို့...
ငါတို့ဟာ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းပါ ဆိုတာကို ဒီနေ့က စ မေ့ပစ်လို့..
နင့်ဘဝ နေ့သစ်တွေကို ချစ်သူနဲ့ အတူတူ လျှောက်လှမ်းလို့..
နင့်အနာဂတ်မှာ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းဆိုတဲ့စာရင်းကို ပယ်ဖျက်လိုက်စမ်းပါ...
ငါကျေကျေနပ်နပ် နဲ့ လက်ခုပ်တီးနေမှာပါ...
ငါ့အတွ က်တော့ နင်ဟာ အမြဲတမ်း အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းပါ..
သူငယ်ချင်းဆိုတာဟာ ဘဝအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာ တစ်ကြိမ်တစ်ခါရှိခဲ့ဖူးလဲ .. တစ်သက်တာလုံးအမှတ်တရ ရှိနေမယ့် အရိပ်တစ်ခုဆိုတာ နင်နားလည်မယ်ဆိုရင်
ငါတို့ရဲ့သူငယ်ချင်းမေတ္တာကို နင့်အတွက်မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ပေးမယ် နင့်ချစ်သူလေး ကျေနပ်စေကွယ်....
( နောက်ဆုံးလက်ကျန်မကောင်းစိတ်နဲ့ နင့်ဓါတ်ပုံပါထည့်ထားတယ် မကျေနပ်လေဖြတ် ပဲ )
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 11:06 AM 8 comments:
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ် အိမ်မက် ၉ တန်းနှစ်လောက်တုန်းကပါ.
အိမ်ကို နိုင်ငံခြားဧည့်သည်တွေ လာလည်ပါတယ်.. ဂျာမနီကပါ ..
ဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ အိမ်မက် အစ်ကိုတစ်ဝမ်းကွဲ ရဲ့ ရည်းစားမိသားစုပါ..သူတို့လာလည်တော့ မြေနီကုန်းမှာ နေတဲ့ အသိမိတ်ဆွေတွေက အိမ်မက်တို့ အိမ်ကိုလိုက်ပို့ပေးပါတယ်.. ရောက်လာတာက ညနေပိုင်းပေါ့..မိသားစုက သုံးယောက်ပါ..
သူတို့ကို လာပို့တဲ့ကားက ပါဂျဲရိုးထင်တယ် သေချာတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး.. ဒါပေမယ့် ကားကြီးမျိုးပဲ အမြင့်ပေါ့နော်.သူတို့မိသားစုက အရပ်တော်တော်ရှည်ကြတယ် ထွားလဲ ထွားတယ်..သူ့သမီး အစ်ကို့ရည်းစားက ဒူးတော်တော် ရှည်ပါတယ်..နဲနဲပိန်တယ်ပေါ့ ..အဲ့ဒီတုန်းက အစ်ကိုနဲ့ သူက ရည်းစားပေါ့ အခုတော့ပြတ်သွားပြီ
ဘာလို့ပြတ်သွားတာလဲလို့မေးတော့ အစ်ကို ဘာဖြေတယ်မှတ်လဲ...
အဲ့ဒီကောင်မလေးက ဒူးအရမ်းရှည်လို့တဲ့း) .. ပြော ပြောချင်ဘူး လိုရင်တစ်မျိုး မလိုရင်တစ်မျိုးနော် ယောက်ျားတွေများ..း)..
သူတို့လာလည်တော့ အဲ့ဒီကားအကြီးကြီးနဲ့ပေါ့. .ဆင်းတော့ သမီးက အရင်ဆင်းတယ်.. ဒူးက ရှည်တော့ ခြေထောက်ကိုထုတ် ခါးကိုကုန်းပြီးဆင်းတယ်... အရပ်ကကလန်ကလားရယ်..ပြီး အမေကဆင်းတယ် အမေက နဲနဲဝတော့ ကြိုးစားပမ်းစားဆင်းရတယ်..ပြီးတော့ အဖေ ဆင်းတယ်.. ခြေထောက်လဲ ရှည် အရပ်ကမြင့် လူကနဲနဲဝ ဆိုတော့ ကားအပေါ်မိုးနဲ့ မလွတ်တော့ ခေါင်းဆောင့်ပါလေရော .. ဒုတ်)))) အာရား))))
(ခေါင်းဆောင့်မိလို့ ထွက်တဲ့အသံနဲ့ သူအော်တဲ့အသံပါ)...း)
အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း အိမ်မက်ထင်လိုက်တာက အော် အနောက်တိုင်းသားဆို အကောင်အကြီးကြီးတွေချည်းပဲပေါ့ အင်း သူတို့ စီးတဲ့ကားဆို လဲ အကြီးကြီးမှ ရမှာလို့..
အဲ ဂျာမနီလဲရောက်ရော အထင်နဲ့ အမြင်တက်တက်စင်အောင်လွဲပါလေရော..လူကောင်ထွားတဲ့လူ ရှိသလို ညှက်တဲ့သူတွေလဲ ရှိတာပါပဲ ..ထားတော့ အိမ်မက် အဓိကပြောချင်တာက ကား.. သူတို့စီးတဲ့ကား..
အိမ်မက်သိသလောက် အမေရိကန်မှာတော့ ကိုယ်ပိုင်ကားမရှိတဲ့လူ မရှိသလောက်ပဲထင်တယ်နော်.. ဂျာမနီမှာတော့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးက ရထားနဲ့ဆိုပိုအဆင်ပြေတယ်..ကိုယ်ပိုင်ရှိတာကောင်းပါတယ်..ဒါပေမယ့် သိတဲ့အတိုင်းပဲ ကားဆိုတော့ ဈေးကြီးတယ်ပေါ့ ..ပြီးတော့ အခွန် ..ကားကြီးရင်လဲ အခွန်ပိုပေးရတယ်တဲ့
ပြီးတော့ ဟိုင်းဝေးလမ်းအတွက် အခွန်...
နောက် ကားပါကင်လဲ ဈေးကြီးတယ်..( အလုပ်က လူတစ်ချို့ frankfurt လာမယ်ဆို ကားကို အလုပ်မှာထား ရထားစီးပြီးလာ ပြန်မှ အလုပ်မှာ ကားဝင်ယူတယ် ကဲ) အဲ့လို
နောက် ဘာတွေရှိသေးလဲ မသိဘူး အိမ်မက်က ကိုယ်ပိုင်ကားမရှိတော့ သေချာတော့မသိဘူး .. ခန့်မှန်းခြေသိသလောက် ပြောတာ.. ဒါကြောင့် ဒီမှာ လူတွေကားဝယ်ရင် ကားအသေးဝယ်ကြတယ်.. မိသားစုနဲ့မနေကြတာလဲပါတယ်.. တစ်ယောက်ထဲသမား.. လင်မယား/သမီးရည်းစား ဒါမျိုးပဲဆိုတော့ ကားအသေးဆိုပိုအဆင်ပြေတယ်လေ..သက်သာတယ်ပေါ့..
အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ အထင်နဲ့ အမြင်လွဲတယ်ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကားမဝယ်ဘူးဆို မဝယ်ဘူး.. ဝယ်ရင်လဲ မိသားစုစီးလောက်တာမျိုးဝယ်ကြတာဆိုတော့.ဒီမှာလို တံခါးတစ်ပေါက်လေးတွေ တစ်ပေါက်ခွဲလေးတွေမရှိဘူး..
အဲ သူတို့ကတော့ ဝယ်တယ် ဒါပေမယ့် ပိစိလေးတွေလေ ကားနဲ့မတူပဲ ဆော့စရာနဲ့ပဲတူနေတာ...
အောက်က ပုံလေးတွေ ကြည့် ကြည့်ပါဦး..
ချစ်ဖို့တော့ကောင်းပါတယ် စီးဖို့တော့ ကျဉ်းကျဉ်း ကြုတ်ကြုတ် ရယ်...နော့
( အိမ်မက် ခုတလော ပျောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ဖြစ်နေတာ အလုပ်ကြောင့်ပါ မနက်ပိုင်းဆင်းရတဲ့အပတ်တွေအားပေမယ့် ညနေပိုင်းဆိုတော့ မအားတော့ဘူး ဒါကြောင့်မောင်နှမတွေစီမရောက်ဖြစ်တာပါ သတိတရလာလည်ကြတဲ့သူများ အားလုံးကို အာဘွားပါနော်..)
ပျောက်နေတဲ့ မမ မမယ်ကိုး
ကို ၈ ယား)
မ သမီးစံ( ထင်တာက အိမ်မက်ထက် ငယ်မလားလို့ ဟီး)
လပြည့်ရိပ် ( ပို့စ်ရေးပေးလို့ ကျေးဇူးပါနော်)
အားလုံးကို အာဘွားပါ.. မရောက်ဖြစ် မနှုတ်ဆက်ဖြစ်ပေမယ့် အမြဲသတိရနေတယ်နော်..
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 5:07 AM7comments:
ကားအနီလေး သူငယ်ချင်းတစ်စု နှင့် ကျောက်တန်းရေလည်ဘု...